Lapatinib poids (231277-92-2) hplc≥XUMX% | AASraw R & D Reagents
Poety Lapatinib (231277-92-2)
/ Products / Ny hafa / Lapatinib (231277-92-2)
SKU: 231277-92-2. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Lapatinib (231277-92-2), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Lapatinib vovoka poeta
Lapatinib vovoka ireo karazana fototra
Name: Lapatinib vovoka
Meny fitetezana 581.05
Vovon-tsolika Lapatinib ao amin'ny cycles Antineoplastic Agent
Generic Name: Lapatinib poids (la PA tin ib)
Ny poety Lapatinib dia fanafody fitsaboana ampiasaina amin'ny fitsaboana iray hafa (capcitabine) ho an'ny olona voan'ny kanseran'ny nono izay miparitaka any amin'ny faritra hafa amin'ny vatany izay HER2 positive (ny tumors izay mamokatra be dia be ny proteinina iray antsoina hoe mpanangona valim-pandrefesana-2) , ary efa manana fitsaboana tranainy hafa.
Ny poety Lapatinib dia ampiasaina ihany koa amin'ny karazana fanafody antsoina hoe letrozole ho fitsaboana ireo vehivavy voan'ny homamiadana amin'ny hormone receptor positive, HER2 positive metastatic teteza voan'ny kanseran'ny nono hormonina.
Ny papaty Lapatinib dia fanafody fitsaboana ampiasaina amin'ny fitondran-tena ho voan'ny kanseran'ny nono. Ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa izy io mba hikarakarana karazana kanseran'ny nono izay niparitaka tany amin'ny faritra hafa ao amin'ny vatana ary tsy namaly ny fitsaboana kansera hafa.
Ny poety Lapatinib dia vondron'ireo fanafody antsoina hoe kinashibitors izay miasa amin'ny fanakanana ny asan'ny proteinina iray izay mampiakatra ny cellules ho an'ny homamiadana.
Ity fanafody ity dia tonga amin'ny takelaka takelaka ary nalaina indray mandeha isaky ny vavony foana.
Ny voka-dratsin'ny vovobony Lapatinib dia ahitana menaka mena sy tanana ary dian-tongotra, aretim-pivalanana, fihenam-bidy, ary moka.
Inona no atao hoe vovobony?
Adult efa ho an'ny taovam-pananahana
-HER2-POSITIVE RATSY FANAHY MASASTATIK (miaraka amin'ny capecitabine): 1250 mg am-bavaka indray mandeha isan'andro ao amin'ny Days 1 mankany 21 amin'ny famerimberenana ny cycles 21 andro mandra-pahatongan'ny fivoaran'ny aretina na toaka poakaty tsy azo ekena.
-HORMONE RECEPTOR-POSITIVE, HER2-POSITIVE MASASTATIC BREAST CANCER (miaraka amin'ny letrozole): 1500 mg am-bavaka indray mandeha isan'andro isan'andro.
-Tandremo ny fanazavana momba ny vokatra fabrikan'ny capecitabine sy ny dosro dosage.
-HER2-positive metastatic kanseran'ny nono dia tokony hanana fivoaran'ny aretina amin'ny trastuzumab alohan'ny fanombohana fitsaboana miaraka amin'ity zava-mahadomelina ity miaraka amin'ny capecitabine.
- Mifanaraka amin'ny capecitabine amin'ny fitsaboana ny marary amin'ny kanseran'ny nono na metastatic izay ny vavony dia manandratra HER2 ary nahazo fitsaboana mialoha, anisan'izany ny anthracycline, taxane, ary trastuzumab.
- Mifanaraka amin'ny letrozole ho fitsaboana vehivavy voan'ny homamiadana amin'ny hormone receptor-positive metastatic kanseran'ny nono izay maneho ny HER2 mpandrindra ho an'ny hormona fitsaboana azy.
Tsy misy data momba ny fanitsiana dosage; Na izany aza, ny pharmacokinetika amin'ity zava-mahadomelina ity dia mety tsy ho voakasika raha oharina amin'ny 2% ny dosage voatazona dia nesorina amin'ny voa.
MIARAHA-MIASA ANY AN-TANIMBARY NY FITONDRANA (FILAZANTSARA / A): Tsy misy ny data.
MITADY TSY MISY HEPATIKA FAMPIANARANA (FILAZANTSARA C): Manalava ny doka:
-HER2-Tsara ho an'ny taovam-pananahana mateastika (miaraka amin'ny capecitabine): 750 mg / andro.
-Hormon Recipe-Positive, HER2-Manana kanseran'ny nonastatoma (miaraka amin'ny letrozole): 1000 mg / andro
MISY HEPATOTOXICITY HEHITRY NY FITIAVANA: Mandrosoa hatrany ny fitsaboana.
Fanamarihana: Ny fanoloran-tsoratry ny fanoloran-tsakafo dia mifototra amin'ny fianarana pharmacokinetic; Tsy misy fanazavana momba ny klinika misy.
FAMPIANARANA AVY AMIN'NY TSY FANTATRA MIKASIKA MIKASIKA MIKASIKA MIKASIKA MALAGASY SY TSY MIKASIKA MIKASIKA MIKASIKA MIKASIKA MIKASIKA TSY MISY: Aza avela hampiasaina raha azo atao. Ny fanitsiana fanitsiana dose dia mifototra amin'ny fanadihadiana momba ny pharmacokinetic; Tsy misy fanazavana momba ny klinika misy.
FAMPIANARANA AVY AMIN'NY TSY FANTATRA MIKASIKA MIKASIKA MALAGASY 450A3: Mampihena ny doka amin'ny 4 mg / andro; dia avelao hiseho mandritra ny herinandro 500 ny fotoana fanasan-dabozo alohan'ny hanitsiana ny fitsaboana azy amin'ny doka mahazatra raha toa ka tapatapaka ilay inhibitor.
FAMPIANARANA AVY AMIN'NY TSY FANTATRA MIKASIKA MALAGASY 450A3: Dosis durée à titrate selon la tolerance; Ampidino ny doka miverina any amin'ny doka mahazatra raha toa ka tsy nijanona intsony.
-HER2-Tsara ho an'ny taovam-pananahana mateastika (miaraka amin'ny capecitabine): Mampitombo ny dose hatramin'ny 4500 mg / andro.
-Hormon Recipe-Positive, HER2-Manana kanseran'ny nonastatoma (miaraka amin'ny letrozole): Mampitombo ny dose hatramin'ny 5500 mg / andro.
GRADE 2 na FIKASANA LEHIBE VENTRICULAR LEHIBE MALAGASY LEHIBE (LVEF) OR LVEF AZO IZAHAY DIA TSY MISY TSY MANAIKY AZY IZAY TSY MAINTSY MANDRAKIZAY: Mijanona ny fialana; dia mety hamerina amin'ny dabam-pandaminana kely iray farafahakeliny herinandro 2 raha toa ny LVEF dia miverina amin'ny ara-dalàna ary ny marary dia tsy mitombina.
-HER2-Tsara ho an'ny taovam-pananahana mateastika (miaraka amin'ny capecitabine): 1000 mg / andro
-Hormon Recipe-Positive, HER2-Manana kanseran'ny nonastatoma (miaraka amin'ny letrozole): 1250 mg / andro
Grade 3 OR Grade 1 na 2 aretim-pivalanana WITH COMPLICATING MAMPIAVAKA (antonony ny mafy kibo cramping, Grade 2 na lehibe kokoa maloiloy na mandoa, nihena fampisehoana toerana, tazo, sepsis, neutropenia Frank mandeha ra, na tsy fahampian-drano): Enga anie hampidritra indray amin'ny ambany levitra rehefa aretim-pivalanana mamaritra ny Grade 1 na latsak'izany.
-HER2-Ny mararin'ny ratram-piterahana matevina (miaraka amin'ny capecitabine): 1000 mg / andro
-Hormon Receptor-positive, HER2-Tsara ny mararin'ny tazomoka any an-kibo: 1250mg / andro
GRADE 4 DIARRHEA: Mitsahatra ny mitsabo.
FANOMEZANTSOA hafa, GRADE 2 na GREATER: mety hihevitra ny fijanonana na ny famindrana ny fanesorana; dia mety hiverina indray amin'ny doka mahazatra raha toa ny tosika dia manatsara kokoa ny Grade 1 na latsak'izay.
TSY MISY MIKASIKA NY TOXICITY: Manatsara ny doka:
Manao ahoana ny mason-dry papatinib
Lapatinib vovoka dia ampiasaina amin'ny capecitabine (Xeloda) mba hitsaboana iray nandroso karazana kanseran'ny nono ny olona izay efa tsaboina amin'ny fanafody fitsaboana simika hafa. Lapatinib vovoka dia ao amin'ny kilasy ny fanafody antsoina hoe kinase inhibitors. Tsy miasa amin'ny alalan'ny fanakanana ny asa ara-dalàna ny proteinina izay famantarana kansera sela mba hihamaro. Izany dia manampy mijanona na hampihena ny fihanaky ny kansera sela.
Lazao ireo mpanome fanampiana ara-pahasalamana rehetra fa ianao dia mandray ny vovony Lapatinib. Anisan'izany ny dokotera, ny mpitsabo mpanampy, ny pharmacist, ary ny toeram-pitsaboana.
Raha tezitra amin'ny vavony ianao, mamelatra, mametaka (kivy), na tsy noana, dia miresaha amin'ny dokotera. Mety hisy fomba hampihenana ireo fiantraikany ireo.
Loza mitatao (aretim-pivalanana) no nitranga tamin'ny poety Lapatinib. Indraindray dia tena ratsy be ny diarrhea ary nitranga ny fahafatesana. Miresaha amin'ny dokotera.
Raha manana tabilao marefo (aretim-pivalanana ianao) dia miresaha amin'ny dokotera. Aza manandrana manasitrana ny aretim-pivalanana raha tsy voamarina amin'ny dokotera voalohany.
Asao ny dokotera hitsabo, araka ny efa nolazain'ny dokotera. Miresaha amin'ilay dokotera.
Mila manana fitsapam-pihetseham-po ianao rehefa mitondra vovony Lapatinib. Miresaha amin'ilay dokotera.
Aza avela hitombo ny voankazo sy ny grapefruit.
Raha mandray digoxin ianao, miresaha amin'ny dokotera. Mety ho voatery hanara-maso akaiky kokoa ny asanao mandritra ny rà ianao raha ianao no mitondra izany amin'ny poety Lapatinib.
Io fitsaboana io dia mety hanimba ny zaza vao teraka raha raisinao izany rehefa bevohoka ianao.
Ampiasao ny fiterahana izay azonao itokisana mba hisorohana ny fitondrana vohoka rehefa mandray ny vovony Lapatinib.
Raha bevohoka ianao na bevohoka rehefa maka vinaingitra Lapatinib, miantsoa miantsena amin'ny dokotera.
Lapatinib Rohe Powder
Lapatinib vovoka Marketing
Manana fiantraikany mahatsiravina ny vovony lapatinib
Miaraka amin'ny vokatra ilaina, ny vovony Lapatinib dia mety miteraka vokatra tsy mety. Na dia tsy mitranga avokoa ireo fiantraikany ireo aza, raha mety hitranga dia mety mila fitsaboana izy ireo.
Jereo amin'ny dokotera avy hatrany raha toa ka misy vokany hafa manaraka ny fitondràna rehefa mitondra ny vovony Lapatinib:
Tsy dia mahazatra
Zava-tsarotra na fikolokoloana
drizareo haingana na tsy miangatra
fahamendrehana eo amin'ny tratra
reraka na fahalemena tsy mahazatra
Ny fanaintainana na ny vavonin'ny vavony na ny tendany
tanimanga miloko mena
jiro na hoditra
fihenan'ny tongotra na tongotra ambany
maso mavo na hoditra
Tsy fantatra ny loza
Ny fanodinkodinana, ny famafazana, ny famafana amin'ny hoditra
fahatsapana ankapobeny ny tsy fahatsapana na aretina
ny fihenjanana na ny fihenan'ny hodi-maso na manodidina ny maso, ny tarehiny, ny molotra, na ny lela
Loko mena mena, matetika amin'ny loko volomparasy
ny fery, ny fery, na ny fotsy fotsy eo amin'ny vava na eo amin'ny molotra
ny fihenan'ny bikany
Ny voka-dratsin'ny vovobony Lapatinib dia mety hitranga matetika fa tsy mila fitsaboana. Ireo voka-dratsy ireo dia mety mandeha mandritra ny fitsaboana raha manitsy ny fitsaboana ny vatanao. Ankoatra izany, ny matihanina amin'ny fitsaboana anao dia mety afaka milaza aminao ny fomba hisorohana na hampihenana ny sasany amin'ireto vokatra manaraka ireto. Jereo amin'ny mpitsabo amin'ny fahasalamanao raha toa ka mbola mitohy na mitebiteby amin'ireto manaraka ireto ny vokany na raha misy fanontaniana momba azy ireo:
fanaintainana eo amin'ny sandry na ny ratra
moka, ririnina, na hoditra mahatsiravina
Ny fihenan'ny hoditra amin'ny tanana sy ny tongotra
Ny fery, ny fery, na ny fotsy fotsy eo amin'ny molotra, ny lela, na ny ao anaty vava
kivy, alahelo, na fanaintainana
fihenam-bava na fampijaliana ny vava
fanangonana tanana sy tongotra
olana amin'ny torimaso
Ahoana ny hividianana vovony Lapatinib avy any AASraw